ဆိုးလ်ရှား အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပြောင်းရွေ့ကြေး အကုန် ထုတ်ပေးမည် ဟု အက်ဝုဒ်ပြော – Sports Soccer News
ဆိုးလ်ရှား အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပြောင်းရွေ့ကြေး အကုန် ထုတ်ပေးမည် ဟု အက်ဝုဒ်ပြော
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်း အတွက်တော့ လက်ရှိ ရာသီကတော့ အမှတ်ပေးဖလား ကို စိန်ခေါ်ဖို့ အကောင်းအခြေအနေ တစ်ရပ်ကို ရောက်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ ။ ယူနိုက်တက်အသင်း ရဲ့လက်ရှိ ရာသီမှာ နောက်တန်း ၊ ကွင်းလယ် ၊ တိုက်စစ် မျှတ သလို စုစည်းမှု ပိုင်းမှာလဲ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေ ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြိုင်ဘက် အသင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ လီဗာပူး ၊ မန်စီးတီး တို့ဟာလဲ ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေ ၊ ကိုဗစ် ပြသနာ တွေနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရပြီး အာဆင်နယ် ၊ ချယ်စီး တို့ဟာလဲ ခြေစွမ်း ယိမ်းယိုင် နေကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဆုဖလား ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ ကြိုးစား နေတဲ့ ယူနိုက်တက် အတွက်တော့ အားသာ ချက် တစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။
လက်ကျန်ပွဲ ဖြစ်တဲ့ဘန်လေ အသင်းကို အနိုင် မဟုတ်ရင် သရေ တစ်မှတ် သာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် မှ အမှတ်ပေး ဇယားမှာ ထိပ် ဆုံးကနေ လွတ်လွတ် ကျွတ်ကျွတ် ဦးဆောင် နိုင်မှာပါပဲ။
ဒီလို အခြေအနေ မျိုးတွေမှာ ပွဲဆက် များလာတဲ့အပေါ် နည်းပြ ဖြစ်သူက ညီးတွား လာတဲ့ အချိန်မှာပဲ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ အပြောင်းအရွှေ့ စျေးကွက်မှာ ဆိုးရှား စိတ်ကြိုက် ကစားသမား တွေ ဝယ်ယူ စေရန်. သန်း 200 အသုံးပြု မယ်လို့ ယူနိုက်တက် အမှုဆောင်ချုပ် အက်ဝုဒ်ဝက် က ကတိပေး ပြောကြား သွားခဲ့တာ တွေ့ရ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် အမှုဆောင်ချုပ် အက်ဝုဒ် က “ကျနော်တို့ ဒီရာသီက အမှတ်ပေး ဖလား ယူဖို့အကောင်းဆုံး အခြေအနေ တခုကို ပိုင်ဆိုင်လာပြီလို့ ဆိုရ မှာပါပဲ။ ဒီလို အနေ အထားမှာ ကျနော် တို့တစ်တွေ အရည်အချင်း ပြည့်မှီတဲ့ ကြယ်ပွင့် ကစားသမားတွေ ထပ်မံ ဝယ်ယူဘို့ လိုပါတယ်။ ဒီအတွက် လည်း အသင်းပိုင်ရှင် တွေကို ဘက်ဂျက် အလုံ အလောက် ချပေးဘို့ ပြောထား တယ်လို့ ယူနိုက်တက် အမှုဆောင်ချုပ် အက်ဝုဒ်ဝက် က ပြောကြား ခဲ့တာ တွေ့ရ ပါတယ် ။
လက်ရှိမှာတော့ ယူနိုက်တက် အမှုဆောင်ချုပ် အက်ဝုဒ် က ကစား သမား တွေ ခေါ်ယူ မယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အသင်းအတွက် တိုက်စစ်မှူး စစ်စစ်တစ်ယောက်နဲ့ နောက်ခံ ဗဟိုအတွင်းလူနေရာအတွက် ခေါ်ယူဖို့အရေး ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ ဆိုထား ပါတယ်။
မန္ခ်က္စတာ ယူနိုက္တက္အသင္း အတြက္ေတာ့ လက္ရွိ ရာသီကေတာ့ အမွတ္ေပးဖလား ကို စိန္ေခၚဖို႔ အေကာင္းအေျခအေန တစ္ရပ္ကို ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ ။ ယူနိုက္တက္အသင္း ရဲ႕လက္ရွိ ရာသီမွာ ေနာက္တန္း ၊ ကြင္းလယ္ ၊ တိုက္စစ္ မွ်တ သလို စုစည္းမႈ ပိုင္းမွာလဲ ထိပ္ဆုံးမွာ ရွိေန ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ၿပိဳင္ဘက္ အသင္းေတြ ျဖစ္တဲ့ လီဗာပူး ၊ မန္စီးတီး တို႔ဟာလဲ ဒဏ္ရာ ျပသနာေတြ ၊ ကိုဗစ္ ျပသနာ ေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ ေနရၿပီး အာဆင္နယ္ ၊ ခ်ယ္စီး တို႔ဟာလဲ ေျခစြမ္း ယိမ္းယိုင္ ေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဆုဖလား ကိုစိန္ေခၚဖို႔ ႀကိဳးစား ေနတဲ့ ယူနိုက္တက္ အတြက္ေတာ့ အားသာ ခ်က္ တစ္ခုလို႔ ဆိုရမွာပါ။
လက္က်န္ပြဲ ျဖစ္တဲ့ဘန္ေလ အသင္းကို အနိုင္ မဟုတ္ရင္ သေရ တစ္မွတ္ သာ ရခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ မွ အမွတ္ေပး ဇယားမွာ ထိပ္ ဆုံးကေန လြတ္လြတ္ ကြၽတ္ကြၽတ္ ဦးေဆာင္ နိုင္မွာပါပဲ။
ဒီလို အေျခအေန မ်ိဳးေတြမွာ ပြဲဆက္ မ်ားလာတဲ့အေပၚ နည္းျပ ျဖစ္သူက ညီးတြား လာတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ လာမယ့္ ဇန္နဝါရီလ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ ေစ်းကြက္မွာ ဆိုးရွား စိတ္ႀကိဳက္ ကစားသမား ေတြ ဝယ္ယူ ေစရန္. သန္း 200 အသုံးျပဳ မယ္လို႔ ယူနိုက္တက္ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ အက္ဝုဒ္ဝက္ က ကတိေပး ေျပာၾကား သြားခဲ့တာ ေတြ႕ရ ပါတယ္ ။
ယူနိုက္တက္ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ အက္ဝုဒ္ က “က်ေနာ္တို႔ ဒီရာသီက အမွတ္ေပး ဖလား ယူဖို႔အေကာင္းဆုံး အေျခအေန တခုကို ပိုင္ဆိုင္လာၿပီလို႔ ဆိုရ မွာပါပဲ။ ဒီလို အေန အထားမွာ က်ေနာ္ တို႔တစ္ေတြ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ ကစားသမားေတြ ထပ္မံ ဝယ္ယူဘို႔ လိုပါတယ္။ ဒီအတြက္ လည္း အသင္းပိုင္ရွင္ ေတြကို ဘက္ဂ်က္ အလုံ အေလာက္ ခ်ေပးဘို႔ ေျပာထား တယ္လို႔ ယူနိုက္တက္ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ အက္ဝုဒ္ဝက္ က ေျပာၾကား ခဲ့တာ ေတြ႕ရ ပါတယ္ ။
လက္ရွိမွာေတာ့ ယူနိုက္တက္ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ အက္ဝုဒ္ က ကစား သမား ေတြ ေခၚယူ မယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အသင္းအတြက္ တိုက္စစ္မႉး စစ္စစ္တစ္ေယာက္နဲ႕ ေနာက္ခံ ဗဟိုအတြင္းလူေနရာအတြက္ ေခၚယူဖို႔အေရး ေဆြးေႏြးေနတယ္လို႔ ဆိုထား ပါတယ္။
ဂျက်ဆီလင်ဂတ်ကို အငှားဖြင့် ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အင်တာမီလန်
ပေါ့ဘာကို ပေါင် ၇၅ သန်း ခန့်ဖြင့် ခေါ်ယူရရှိရန် ကြိုးပမ်းမည့် ပီအက်စ်ဂျီ